Ogaden News Agency (ONA) – Waxaa shir mihiim ah isugu yimid Faracyada ka hawl gala Deegaanada Faafan iyo Dhadhaab.
Waxaa shir mihiim ah isugu yimid Faracyada ka hawl gala Deegaanada Faafan iyo Dhadhaab.
kulankan oo ka dhacay Xerada Qaxootiga ee Xagardheere ayaa waxaa lagu dajiyay qorsho shaqaydkii sanadkan cusub ee ay ku hawl gali lahaayeen faracyada faafan iyo Dhadhaab.
Shirkan ayaa ugu horeeyntii lagu furay aayado Quraan iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Sh.Ahmed Dahir oo kamid ahaa Ergadii kasocotay faraca Midnimo ee xerada Dhagaxley sheekha ayaa soojeediyey wacdi meelo badan taabanaya oo ka soo qayb galayaasha shirka qalbigooda gilgilay.
shirka ayaa waxaa si rasmi ah u furay gudoomiyaha Faraca Xagardheere mudane Abdulahi Badal oo marti galinayay shirka. Mudane Abdulahi ayaa warbixin dheer oo ku saabsan shirka iyo ujeedooyinka loo qabtay iyo waliba Natiijada laga sugayo la wadaagay ka soo qayb gala yaashii shirka.
kulankan ayaa Waxaa khadka telefonka kaga soo qayb galay gudoomiyaha Bariga Africa(JABSO)mudane A/nuur Muse oo xogo muhiim aha siiyey kasoo qayb galayaashii shirka. Warbixinadaa ay soo jeediyeen masuuliyiinta kadib ayaa waxaa laguda galay qodobo mihiim ah oo ay ka mid yihiin.
1- Sidii loo sii xoojin lahaa xidhiidhka ka dhexeeya mucaaradka xukuumada Itoobiya ee ku sugan aagaas. Hoostana waxaa laga xariiqay in ay midnimada mucaaradku tahay mida soo dadajin karta in uu xukunk wayaanahu si dag dag ah uga baxo meesha.
2- Mideeynta bulshada qaybaheeda kala gadisan sida Dhalinyarada, Haweenka, qaybaha kale ee bulshada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigooda siyaasi, Midnimadu waa guusha gumaysi diidka, waana dhabar jabka gumaysiga iyo waxii kaalmeeya midabkuu doono hayeeshee.
3- Abaabulka Bulsha waynta Soomaaliyeed ee ku dhibataysan Xeryaha Qaxootiga iyo siday nabad ugu soo dabaali lahaayeen wadankooda, isuna kaashan lahaayeen.
4- Kor u qaadida wax barashada oo mihiim u ah qof kasta oo aduunka saaran. Aad waxaa dayarta loogu dhiiri galiyay in ay aqoontooda kor u qaadan inta ay fursada haystaan. Sidoo kale waxaa guud ahaanba bulshada lagu dhiiri galiyay in ay ka qaybqaataan ilaalinta Nabadgalyada iyo anshaxa wanaagsan ee xidhiidhka bulshada.
shirkan ayaa ku soo dhamaaday guul